Tsy hovidiam-bola ny fandresena e !
Azo hakana lesona tsara iny lalaon’ny ekipam-pirenena Malagasy eo amin’ny baolina kitra omaly iny.
Nalaza ho be sinema efa hatramin’izay Isika malagasy. Ireo mpisehatra politika vaventy eto Madagasikara no tena havanana indrindra amin’izany.
Hanao amboletra indray hoe e ?
Mifantoka hatrany any amin’ny fiandrasana izay ho valim-pifidianana ny sain’ny rehetra.
Mamboly ady sy hady
Anaty vanim-potoana goavana natao hiandrandrana maraina vaovao ho an’ny firenena isika ankehitriny.
Fandemen-tsaina sy fampisaraham-bazana
Raikitra ny fandemen-tsaina isan-karazany ataon’ny kandida iray sy ny mpomba azy fa efa azon’izy ireo, hono, ny fandresena amin’ity fifidianana ity.
Raha ny fizotry ny toe-draharaha ankehitriny aloha dia efa hita miharihary fa ho any amin’ny korontana sy ny tsy fahatontosan’ny fifidianana amin’ity taona ity. Raha ho tanteraka aza angamba izany dia hivoahana « Olom-boafidy tsizarizary indray » na ilay antsoin’ny mpanjanaka hoe « mal élus ». Hifandroritana tanteraka ny resaka fanorenana ifotony misarizoro amin’ingahy federalisma sy tetezamita vaovao. Ny teny an-kianja moa dia io efa mila hadino ilay hoe « Miala Rajao ». Ao anatin’izany rehetra izany dia mbola volombolon’ny ho olom-boafitaka hatrany Ramalagasy raha toa ka efa niaina ny hirifirin’ny famitahana nandritry ny 50 taona mahery. Fanambaniana ve sa tena fahamehana ? Fandrangitana ve sa tena tsy fahaiza-manaon’ireo mpanapa-kevitra no nahatafatsangana ity governemanta hafa dia hafa ity ? Iza no manampahaizana afaka manazava fa tokony ho mpahay tantara no hipetraka eo amin’ny toeran’ny minisiteran’ny varotra ? Olona efa nametrahana fitoriana maro teo anivon’ny Bianco ary mbola voasaringotra amina raharaham-pitsarana hafa ihany koa no tokony hitantana ny serasera ? Amin’io, tsy niafina ny hadalany fa dia hitan’izao tontolo izao ny nitondrany vahoaka nitora-bato teo an-tokotanina biraom-panjakana. Tsy lazaina intsony ny fipetrahana mpahay lalàna avy naloan’ny minisiteran’ny asam-panjakana nafindra any amin’ny tontolon’ny fifandraisan-davitra sy ny hafa tsy voatanisa naha olom-boafitaka antsika.